Ny zava-maitso rehetra tsy misy ekena dia tena mahasoa, satria loharanom-pamokarana vitaminina, mineraly ary fibre. Tena mahavariana ny endriky ny famatsian-drano, ary azo atao ny mampitombo io karazan-javamaniry tsy misy fotony io amin'ny toe-javatra rehetra. Avy amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny antony maha-sarobidy ny vokatra toy izany amin'ny sakafo.
Vitaminina famafazana rano
Misy vitaminina be dia be ao amin'ny famatsian-drano: A, C, E, K, PP ary D, ary efa misy ny vondrona B. , phosphor ary ny hafa. Ankoatr'izany, ny akora dia betsaka ihany koa ny singa ilaina mahasoa - oils essentiales, flavonoides, sns.
Sakafo kalorika kesika
Ny 100 g ny vokatra dia 32 kilao monja, izay 2.6 g ny proteinina, 0,7 g ho an'ny tavy ary 4.4 g ho an'ny tsiranoka. Manampy salady salady sy sakafo hafa ianao, mampihena ny votoatiny kalorika ary mampitombo ny votoatin'ny vitamina sy ny fibre ao aminy.
Ny fampiasana kalsioma dia atolotra ho an'ireo izay te ho lany tamingana - azo antoka fa manampy ny salady, tsy matahotra ny manimba ilay sary.
Ny fampiasana kesika
Ny karazana ilaina amin'ny cress-salady dia andiany lehibe - amin'ny fanamafisana ankapobeny ho an'ny fahasalamana eo an-toerana. Diniho ny tombontsoa azon'ity vokatra ity amin'ny antsipiriany bebe kokoa:
Mampitombo ny fialan-tsasatry ny marary ny watercress, manampy ny fizotry ny digestive;
dia mandray anjara amin'ny fampitomboana ny firafitry ny ra;
manampy hamerina torimaso tsara sy hampihenana ny adin-tsaina ;
mampiroborobo ny fandroahana ny tavy avy amin'ny vatana;
manampy hanasitrana ratra, hoditra, aretina hoditra;
mahomby amin'ny ady amin'ny kohaka sy bronchitis;
voatokana ho an'ny cholelithiasis;
manampy amin'ny fitsaboana ny tosidra;
dia mpitsabo mpanamora sy manohitra ny atidoha;
manamaivana ny soritr'aretina mangatsiaka, manamora ny toe-pahasalaman'ny marary;
Inoana fa ny fampiasana tsy tapaka ny famokarana kesika na tincture avy aminy dia mampitombo ny herin'ny lehilahy ary tena tsara ny famindrana ny prostatitis;
dia fisorohana tsara ny aretina amin'ny maso sy ny fikojakojana ny fahitana;
mampihena ny mety ho voan'ny kansera;
manampy ny fanaintainana amin'ny fery;
Ny fampiroboroboana ny fiarovana ny vatana dia omena indroa isan'andro isan'andro ary misy menaka amin'ny crème.
Maro no manome toky fa: mandray soa sy mampidi-doza ny famatsian-drano. Na izany aza, tsy misy dikany io fanambaràna io - Tsy azo hanina afa-tsy avy amin'ireo izay mijaly amin'ny tsy fandeferana na ny tsy fahampiana.
Seleri manimba sakafo
Ny tombony amin'ny tavy
Ny sakafo mahavelona - inona no dikan'izany, ary ahoana no handanjana sakafo?
Biby mandevy - votoatin'ny kaloria
Firy ny karbaona ao anaty fanalam-baraka?
Pesta matavy - tsara sy ratsy
Sakamakiro maitso - tsara sy ratsy
Blackberry dia tsara
Durian - toetra mahasoa
Inona no voankazo vitaminina C?
Leshchina - toetra mahasoa sy fanoherana ny fanomezam-pahasoavan'ny ala
Kefir miaraka amin'ny kokombom-bidy
Ny toeram-pambolena tandrefana ao Olympia
Soup avy amin'ny duck
Fitafy fitafy ho an'ny vehivavy - hatsaran-tarehy ara-panatanjahantena ho an'ny lamaody
Black jacket - ahoana no hamoronana sary sokitra miaraka amin'ny jacket conventional?
Hery amin'ny labia
Salmonellose - vokany
Fashion Manicure - Autumn 2014
Ny fanatanjahan-tena an'ny ankizy dia mifanaraka amin'ny tovovavy
Hydrogel ho an'ny voninkazo
Ny valindrihana ao amin'ny garazy
Mofo maitso amin'ny antsalany - fomba mahandro pyshanka mofomamy amin'ny rano na amin'ny ronono?
Inona no atao hoe Metronidazole, ary ahoana no fomba ampiharana tsara ny endri-tsoratra rehetra?
Tantaran'ny lamaody tamin'ny taonjato faha-20